Cali Xaraare oo VOA ka tagay,Mr Yabarawna Ku eedeeyay Qabyaalad | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > SOMALI NEWS, Somaliland, WARARKA	> Cali Xaraare oo VOA ka tagay,Mr Yabarawna Ku eedeeyay Qabyaalad
Cali Xaraare oo VOA ka tagay,Mr Yabarawna Ku eedeeyay Qabyaalad
Tuesday, November 9, 2010 Laaska News
Weriyaha caanka ah ee Soomaaliyeed, oo dadku u xiiseeyaan marka uu barnaamijyada iyo wararka VOASomali daadihinayo, ayaa shaqadii looga joojiyey hab qabyaalad ku salaysan,sida uu waraysi ku bixiyay.
Cali oo la hadlayey shabakadda Oodweynenews.com ayaa uga warramay in isaga iyo Cabdiraxmaan Yabarow, Tafatiraha VOA-da qaybta Soomaaliga, ay sal u ahayd in laga joojiyo shaqada oo qandaraaskii weriyenimo ee sannad walba loo cusboonaysiin jiray uu Mr. Yabarow diiday in dib loogu cusboonaysiiyo.
Weriye Cali ayaa arrintan u aaneeyey mid qabyaalad salka ku haysa.
Waxa uu sheegay in 7 weriye oo Cali ugu dambeeyey, ahaana dadkii tiirka u ahaa dhismaha idaacadda oo ay ka mid ahaayeen dadka hoos ku xusan:
Qaar ka mida weriyayaasha Yabor daraaddiis uga tegey shaqada idaacadda VOA-da
Maxamed Cumar Axmed Haydara
Iyo isaga oo ku toddoba ah shaqada looga eryey asbaabo la mida kuwa isaga lagu beegsaday.
Mr. Yabarow ayaa idaacadda VOASomali, sida macallinkiisu, Yuusuf Garaad ka yeelay BBCSomali, ka dhigay isaguna shaqaalaha idaacadda kuwa boqolkiiba 90 ka soo jeeda beeshiisa.
“Toddobadaa weriye ee caanka ah; ahaana dadkii ugu tayada wanaagsanaa weriyayaasha, maxaa looga waayey hal mida oo Yabarow beeshiisa ka tirsan,” ayuu yiri Cali.
“Yabarow waa nin qabyaaladi qaadday, oo ku lug leh iska horkeenka ummadda Soomaaliyeed ee dagaalladu aafeeyeen…waan la fadhiistay anigoo kula taliyey Cali ahaan inuu bal ka waantoobo qabyaaladdaas indhaha ka ridday, laakiin hawshiisii ayuun buu sii watay…markii shaqada layga caydhinayey wax digniin ah la ima siin, sidii kuwii iga horreeyey, taleefan uunbaa ii soo dhacay laygu sheegay in qandaraaskaygii aan la cusboonayn ka dib markuu Yabarow diiday in la jadiidiyo,” ayuu raaciyey Cali.
HALKAN KA DHEGEYSO WARAYSIGA OODWEYNENEWS.COM LA YEELATAY CALI XARAARE.
Mr.Cali waxaa kale oo uu sheegay in uu webs ku xiran Mr.Yabaraw inay si khaldan wax ugu qoreen,isaga oo qarinaya xaqiiqda rasmiga ah ee shaqa ka tagista.
Gabagabadii,akhristaw bal aragtidaada bal ii soo gudbi waa layaabe.
Tags: cali xaraare, Somaliland, war, wariye
Wasiirka Warfaafinta Somaliland oo jawaab kulul ka bixiyay eedeyn katimid Puntland Faahfaahin Qaraxii Hargeysa:Khilaaf laba nin oo sababay Bam la tuuray-9 dhaawaca.